दुई वर्षभित्र आफ्नो फोन ‘रिसेल’ गर्न चाहनुहुन्छ ? आइफोन नै किन्नुस् « Khabarhub
दुई वर्षभित्र आफ्नो फोन ‘रिसेल’ गर्न चाहनुहुन्छ ? आइफोन नै किन्नुस्
काठमाडौँ– कुनै फोन बजारमा आएको १२ देखि २४ महिनाभित्रमा त्यसको मूल्य घट्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। युकेबाट प्रकाशित उक्त रिपोर्टअनुसार आइफोन १२ प्रो बजारमा आएको ६ महिनामा यसको मूल्य कायम राख्ने सन्दर्भमा उत्कृष्ट फोन थियो। यसको मूल्यमा केवल ३२ प्रतिशतले मात्र ह्रास आएको थियो।
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७८, मंगलबार ६ : ४५ बजे